Maalinta: Noofambar 29, 2019
Bandhigga BUMATECH wuxuu Albaabadiisa Furay; Da'da casriga ah ee aan ku nool nahay, geeddi-socodka wax soo-saarka ayaa isbeddelaya. Horumarka tikniyoolajiyada, oo bixiya tamar yar iyo hufnaan badan, ayaa sidoo kale jooga qaybta wax soo saarka mashiinka. mashiinka [More ...]
Madaxa Midowga Shaqaalaha Shaqaalaha Gaadiidka iyo xubnaha Guddiga Fulinta ee Laanta ayaa xafiiskiisa ku booqday Maamulaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun. Kulankaas, waxaa ugu horreeyay Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun [More ...]
Ankara İzmir YHT 2022 Sanadka oo Dhameystiran; Wasiir Turhan wuxuu soo bandhigay khudbad uu ka jeedinayey Guddiga Qorsheynta iyo Miisaaniyadda ee Barlamaanka halkaas oo miisaaniyada Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha laga wada hadlay sanadka 2020. [More ...]
Kulan 'wada tashi' oo caadi ah ayaa waxaa qabtay Eskişehir Rugta Wershadaha (ESO) iyo Eskişehir Organised Zone Zone (EOSB). Kulankaas, qiimeynno lagu sameeyay waaxaha nidaamka tareenka ayaa la baarey. Rugta Wershadaha Eskişehir [More ...]
Isbitaalka Magaalada Kocaeli ee Magaalada Kobaneli wuxuu raadinayaa Kheyraadka Mashruuca Tram; Duqa Magaalada Kocaeli ee Magaalada Büyükakın, oo mashruuca mitirka u wareejiyay Wasaaradda Gaadiidka oo culeys weyn ka qaaday dhabarka magaalada, [More ...]
Khadka aan dhamaadka lahayn ee Wadada Tumashada Magaalada Bursali ee Magaalada Bursali; Khadka tareenka ee T2015, qandaraaska oo uu sameeyay Duqa Magaalada Magaala-weyn ee Altepe ee 2, wuxuu fulinayaa dhammaystirka 2018 bisha Juun [More ...]
Marmaray Ayaa Dhigtay Rikoodhka Rakaabka Rakaabka; The “4. Kamuran Yazıcı, Maareeyaha Guud ee TCDD Taşımacılık A.Ş. wuxuu ka hadlay "Gaadiidka iyo Saadka" gudaha baaxadda Shirka Ganacsatada Caalamiga ah ee Silk. [More ...]
Iyada oo ay sabab u tahay weerarkii gubashada ee saldhiga dhexe ee Cape Town, oo ah magaalada caasimada ah ee Koonfur Afrika, baabuurkii tareenka 2 ayaa qabsaday dab. Dhammaan duullimaadyadii khadka ku jiray ayaa la kansalay sababo la xiriira gubashada baabuurta tareenka. Arson [More ...]
Bixinta Khadka Tooska ah ee 'Amazon Free Express'
Amazon.com.tr 300 waxay bixisaa adeeg Bixinta Express oo Bilaash ah oo ku saabsan iibsiyada ka badan TL. 28 ayaa laga iibiyay Amazon.com inta lagu jiro Jimcaha la Filayo iyo Waqtiga Isniinta ugu Fiican inta u dhexeysa November iyo 2 Diseembar [More ...]
Xarunta Wicitaanka ESHOT ayaa Xallisa Dhibaatada Muwaadinka
Xarunta Wicitaanka ESHOT ayaa Xallisa Dhibaatada Muwaadinka; Ku dhawaad ​​6 kun oo codsi ayaa loo sameeyaa xarunta wicitaanka ee Agaasinka Guud ee ESHOT. Boqolkiiba 82 ee codsiyada si dhakhso leh ayaa loo xaliyaa. Muwaadiniinta Xarunta Wicitaanka ESHOT [More ...]
Iyada oo la tixgalinayo baahida iyo rabitaanka muwaadiniinta magaalada caasimada ah, Dowlada Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa adeegyadeeda si ay u fududeyso nolosha hooyooyinka. Sida uu dhigayo amarka Mansur Yavaş, Duqa Magaalada Ankara Metropolitan District, Kızılay, Keçiören, Sincan iyo [More ...]